လိမ်လည်လှည့်ဖျားခြင်းကိုစောင့်ကြည့်နိုင်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးဝှက်ထားသော SPY ကင်မရာ ၁၀ ခု OMG Solutions
Top 10 လိမ်လည်လှည့်ဖျားနေသောအိမ်ထောင်ဖက်ကိုစောင့်ကြည့်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးဝှက်ထားသော SPY ကင်မရာများ
ရုရှားစကားပုံတစ်ခု“ Trust but Verify” တစ်ခုရှိသည်။ ယုံကြည်မှုသည်လူနှစ် ဦး အကြားဆက်ဆံရေးကိုခိုင်မြဲစေသည့်အခြေခံအရာဖြစ်သည်။ စုံတွဲတိုင်းနီးပါးသည် ၄ ​​င်းတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကသူမအပေါ်လှည့်စားနေသည်ဟုထင်သောအဆင့်ကိုဖြတ်သန်းသွားသည်။ အာရုံစူးစိုက်မှုနည်းနည်းနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုလုပ်တာကလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကိုလိမ်လည်လှည့်ဖျားမှုကနေကူညီပေးပါတယ် သို့သော်သင်သည်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကိုတစ်ချိန်လုံးဂရုမစိုက်နိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့်ဤဆောင်းပါးတွင်သင့်အိမ်ထောင်ဖက်သည်သင်လိမ်လည်နေသည်ဟုသို့မဟုတ်မမှားကြောင်းရှာဖွေရန်သင်အသုံးပြုနိုင်သည့်ထိပ်တန်း 10 လျှို့ဝှက်ထောက်လှမ်းရေးကင်မရာများကိုကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသွားပါမည်။
SPY013 - ဖုံးကွယ်ထားသောနာရီ -
ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်ယနေ့အချိန်၌စကားလုံးတစ်လုံးမျှသာဖြစ်တော့သည်ဟုမည်သူမျှအလေးအနက်မထား၊ သူတို့ကိုသစ်ပင်တစ်ပင်ကဲ့သို့ပေါ့ပေါ့တန်တန်သဘောထားကြသည်။ ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာမင်းကိုမင်းကိုချစ်တယ်လို့မင်းဆက်ပြောနေတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုတောင်သင်မယုံနိုင်စရာဖြစ်ပေမဲ့သူကသူမတွေ့တဲ့သူတိုင်းနဲ့အတူပရောပရည်လုပ်နေတယ်။ သူမသည်သင့်နှလုံးသားကိုဖျက်ဆီးနေသည့်ကစားသမားတစ် ဦး လော၊ တရား ၀ င်ချစ်မြတ်နိုးသူတစ် ဦး ဟုတ်မဟုတ်ကိုသင်မည်သို့ရှာဖွေမည်နည်း။ မှန်ပါသည်၊ SPY013 သည်အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤချောမွတ်သောလျှို့ဝှက်နာရီကင်မရာကိုမည်သည့်နေရာ၊ မည်သည့်နေရာတွင်မဆို၊ မည်သည့်နေရာတွင်ဖြစ်စေ၊ မည်သည့်နေရာတွင်ဖြစ်စေအစက်အပြောက် (သို့) ကင်မရာအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခြင်းမခံရဘဲသင့်လက်တွဲဖော်ကိုမျက်ခြည်မပြတ်စေရန်အကောင်းဆုံးထောင့်ကိုပေးစွမ်းနိုင်သည်။ 1080p HD ညဉ့်နက်ပိုင်းမြင်ကွင်းနှင့်သူမသည်ညအချိန်များတွင်သူမတစ် ဦး ဦး ၏အိပ်ရာထဲမဝင်စေရန်သေချာစွာအားသာချက်ပေးသည်။ ဒါကသာမကဖန်သားပြင်ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့သေးငယ်တဲ့လုပ်ရပ်တိုင်းကိုသိစေရန်လှုပ်ရှားမှုထောက်လှမ်းခြင်းအင်္ဂါရပ်များပါ ၀ င်သည်။
SPY088 - WIFI AIR လတ်ဆတ်သောကင်မရာ
ခင်ဗျားတို့ရဲ့လှည့်စားမှုအတွက်သံသယရှိတယ်၊ ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကတခြားတစ်ယောက်ယောက်ကိုမြင်နေတယ်လို့မင်းထင်နေရင်ခင်ဗျားရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကိုတွန့်ဆုတ်အောင်ဘယ်လိုရှောင်မလဲ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ သင်နဲ့သူလျှိုလုပ်တဲ့ကိရိယာကိုလူတ ဦး တယောက်ရဲ့မျက်လုံးထဲကမမြင်နိုင်အောင်သေချာအောင်လုပ်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်တယ်။ ပြီးတော့လေကိုလန်းဆန်းစေရုံသာမကလေကိုသန့်ရှင်းစေမည့်အစားတစ်စုံတစ် ဦး အားရှောင်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းသည်သင့်အားလိမ်လည်လှည့်နေစဉ်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်မတူသည့်ထောင့်ကိုဆက်လက်ထားရှိခြင်းကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဤစက်သည် 70 နာရီအထိတစ်ပြိုင်တည်းမှတ်တမ်းတင်နိုင်ပြီးသင့်အားမည်သည့်အချိန်တွင်သင်လိုချင်သည်ဖြစ်စေ၊ သင်လိုချင်သည့်အခါတိုင်းဘက်ထရီကုန်သွားမည်ကိုစိုးရိမ်စရာမလိုဘဲသင့်အားအကြာကြီးရိုက်ကူးနိုင်ခြင်းအားဖြင့်ခေတ္တရပ်တန့်ခြင်းမရှိဘဲမှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် 100 နာရီအထိလည်းအဆင်သင့်အနေအထားရှိနိုင်သည်။ သင်အလုပ်မှာ၊ ကောလိပ်တွင်ဖြစ်စေအခြားတစ်နေရာရာ၌ရှိလျှင်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကရှေ့ဆက်သွားပြီးတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုဖုန်းဆက်သောအခါဝိုင်းဝန်းကူညီလိမ့်မည်။ မည်သူမဆိုန်းကျင်လေထုကိုပိုမိုသန့်ရှင်းစေလိုသောသူဖြစ်ကတည်းကအမှန်တကယ်ဘယ်နေရာမှာမဆိုဒီတက် tuck?
SPY151 - လျှပ်စစ်ရိတ်စက် / ရင့်ဇီ MINI DVR CAMERA:
လှည့်စားခြင်းကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ အမျိုးသမီးများသည်ယောက်ျားများကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးကြရသည့်အချိန်များနှင့်အမျှသူတို့ချစ်မြတ်နိုးရသူများ၏နှလုံးသားကိုအချည်းနှီးဖြစ်စေသည့်အလားစိတ်ပျက်အားငယ်စေသောကြောင့်ယနေ့တွင်အပြစ်တင်ခံရမည့်တစ်ခုတည်းသောအမျိုးသမီးများဖြစ်သည်။ ဒီတော့မင်းကကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုသစ္စာစောင့်သိသူတစ်ယောက်ဆိုတာသေချာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ တစ်ပြားမှနှစ်ဒေါ်လာပေးတဲ့သူတစ်ယောက်ကိုမင်းအပေါ်ပစ်ချလိမ့်မယ်။ သေချာတာပေါ့၊ သူကိုစောင့်ကြည့်ပြီးမင်းမရှိတဲ့အချိန်မှာဒါမှမဟုတ်သင်အနားမှာမရှိတဲ့အချိန်မှာသူမကအခြားကြက်တစ်ကောင်ဒါမှမဟုတ်တစ်စုံတစ်ခုကိုလှည့်ပတ်သွားတာမဟုတ်ဘူး။ ဒီရည်ရွယ်ချက်အတွက်ဒီစက်ဟာအခြေအနေကိုရောစပ်ပြီးသံသယဖြစ်စရာမလိုအောင်အကောင်းဆုံးကိရိယာဖြစ်တယ်။ SPY151 သည်အရည်အသွေးမြင့်မားသော HD အရည်အသွေးရှိဗီဒီယိုများနှင့်အသံနှင့်အတူတစ်ချိန်တည်းတွင်အသံ၊ အသံဖမ်းစက်များနှင့်မည်သည့်နေရာတွင်မဆို၊ မည်သည့်နေရာတွင်ရှိနေသည်ဖြစ်စေအသံကျယ်။ ကြားနိုင်သည့်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး ကလိမ်လည်လှည့်ဖျားနေသည်ကိုသေချာစေရန် (သို့) သေချာစေရန်မှတ်တမ်းတင်ထားသည့်ဆီလျှော်မှုအခြေအနေမရှိစေရန်လျောက်ပတ်စွာအားသွင်းထားသည့်နှုန်းနှင့်ထူးခြားသည့်3အိမ်များကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်။
ဒီသေးငယ်သောအရာကိုဆောင်းပါးများစွာတွင်ယခုဖော်ပြပြီးပြီဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့်၎င်းအတွက်အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်ချက်များသည်များပြားလှသည့်စာရင်းများရှိနေခြင်းကြောင့်အဆုံးသတ်တော့မည်မဟုတ်ဟုထင်ရသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ WIFI charger ကင်မရာအကြောင်းပြောနေတာပါ၊ ဘယ်တော့မှမရှာဖွေနိုင်တဲ့ရှာဖွေနိုင်ဆုံးကင်မရာတွေထဲကတစ်ခုပါ။ ၎င်းကိုသင်၏အိမ်ရှိမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုတပ်ဆင်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ပါ ၀ င်သောအခြားမိန်းကလေးသို့မဟုတ်ကောင်လေးအားသတိပြုရန်အဆင့်မြင့်လုံခြုံရေးသာမကချောမွတ်သောအစွန်းကိုလည်းသေချာစေရန် WIFI ကိုအားသွင်းပါစေ။ ၎င်းသည်စားပွဲပေါ်၌သော်လည်းကောင်း၊ အခြားမည်သည့်ကက်ဘိနက်တွင်သော်လည်းကောင်းထားနိုင်ခြင်းမရှိသေးသော်လည်း၎င်းသည် 10180p မှတ်တမ်းတင်ကင်မရာနှင့် 180 ဒီဂရီလည်ပတ်မှုစွမ်းရည်ကြောင့်အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုရရှိစေ ဦး မည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်နှစ် ဦး စလုံးအတွက်အကြွင်းမဲ့ကယ်တင်ခြင်းနှင့်ဆက်ဆံရေးကယ်တင်ခြင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏နှလုံးနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတူတူနေရန်သေချာစေသည်။
SPY175 - WIFI POWERBANK ကင်မရာ
မျက်မှောက်ခေတ်ခေတ်တွင်လူတို့သည်အထူးသဖြင့်ချိန်းတွေ့သည့်ဆိုက်များတိုးများလာခြင်းနှင့်နေရာအနှံ့တွင်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကိုသင့်ထံမှလက်တွဲရန်ခိုးယူသောအကောင့်အတုများကြောင့်လူအများဖန်တီးနေကြသည်။ ယခုဤရှုပ်ထွေးမှုမျိုးကိုရှောင်ကြဉ်ရန်နှင့်သင်ချစ်မြတ်နိုးရသူသည်ထိုကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခုအတွက်မကျရောက်ခြင်းသို့မဟုတ်လှည့်စားခြင်းများပြုလုပ်ရန်သေချာစေရန်, SPY175 သည်အရာအားလုံးသင့်ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ရှိနေပြီးသေချာစေရန်သင်လိုအပ်သောအရာဖြစ်နိုင်သည်။ သူသည်သူလုပ်နေသည့်အရာ၊ သူတွေ့ဆုံနေသူနှင့်သင်အိမ်၌ရှိနေသည်ဖြစ်စေ၊ အိမ်၌ရှိနေသည်ဖြစ်စေတစ်ချိန်တည်းတွင်ဖုန်းခေါ်ဆိုသူအားကြည့်ရှုရန်သင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကိုကျော်သွားပါ။ နောက်ဆုံးတွင်နည်းပညာမြင့်တက်လာသည့် အချိန်မှစ၍ ဖုန်းအများစုသည်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်မိန်းကလေးနှစ် ဦး နှင့်တပြိုင်နက်ပရောပရည်ပြုခြင်းနှင့်မိန်းကလေးငယ်များပြုခြင်းတို့ကြောင့်ဖုန်းသည်ယနေ့လိမ်လည်ခြင်း၏အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။ ဤသူလျှိုကင်မရာကိုတပ်ဆင်ပါ၊ အားသွင်းပါ၊ သင်လိုချင်သောထောင့်သို့မဟုတ်အစက်အပြောက်၌ထားပါ။ 4K ကင်မရာကြည်လင်ပြတ်သားမှုနှင့်အတူသင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အားအလင်းရောင်နည်းသည့်အချိန်တွင်ပင်စုံလင်သောမျက်လုံးသေချာစေရန်ညဘက်မြင်ကွင်းအထောက်အပံ့ဖြင့်ပြုလုပ်ပါ။ အစက်အပြောက်။
SPY297 - ဝိုင်ဖိုင်နာရီကင်မရာ
လူတိုင်းဟာသူတို့ဘတ်ဂျက်ကိုအကုန်အကျခံပြီးကတည်းကဒီအရာအားလုံးကိုအရာရာတိုင်းအတွက်တစ်ခုစီအတွက်လုပ်နေကြတာကြာပြီဖြစ်လို့သင်တစ်ချိန်တည်းမှာ packet တစ်ခုတည်းနဲ့ပေါင်းပြီးသင်လိုချင်နေတဲ့ပစ္စည်းမျိုးစုံကိုပေးနိူင်တယ်။ သင်သည်ထိုလူများထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်လျှင် SPY297 သည်သင့်အတွက်မှန်ကန်သောအရာဖြစ်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်နည်း။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါဟာပုံမှန်နာရီ၊ နှိုးစက်၊ Wi-Fi ကင်မရာနဲ့ကြိုးမဲ့ Bluetooth စပီကာလိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းအလုပ်လုပ်လို့ပဲ။ ထို့ကြောင့်သင်၏လက်တွဲဖော်သည်ညအချိန်တွင်သို့မဟုတ်သင်အပြင်ထွက်နေစဉ်သင့်ကိုလိမ်လည်လှည့်စားခဲ့ပါက၎င်းသည်သူ၏အချိန်ကိုထုတ်ဖော်ပြသရန်အတွက်သင်လိုအပ်မည့်ပြည့်စုံသောနာရီသာဖြစ်သည်။ ဒီကင်မရာသည် HD resolution ကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်သောကြောင့်အလွန်ကောင်းမွန်သောအထောက်အထားဖြင့်ဖြစ်သည်။ ညအချိန်၌ပင်ဗီဒီယိုများ! မင်းရဲ့နှလုံးသားကိုဖြိုခွဲတဲ့သူကဘယ်သူ့ကိုမှလှည့်မကြည့်ရဲဘူးဆိုတာသေချာအောင်လုပ်ခြင်းဟာသူဟာသင်လိမ်ညာနေသည်ကိုရှာတွေ့ပြီးနောက်မည်သူကမည်မျှသွားနိုင်သည်ကိုသိရန်ကြောက်နေသောငရဲဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒီ gadget ကို Bluetooth စပီကာတစ်ခုအဖြစ်လည်းအသုံးပြုနိုင်ပြီးအသုံးမ ၀ င်တော့သည့်တိုင်၎င်းကိုနှိုးစက်နာရီဖြစ်စေစဉ်သင်အကြိုက်ဆုံးအသံများကိုဖွင့်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကပင်ဖြစ်သည်။
SPY032 - ဝိုင်ယာမဲ့ WIFI PINHOLE ကင်မရာ
ရှေးဟောင်းထောက်လှမ်းရေးအဟောင်းနှင့်တူသောအရာတစုံတခုမျှဟုတ်မှန်သည်မဟုတ်လော SPY032 သည်သင်၏လက်တွဲဖော်သည်တစ်စုံတစ်ယောက်နှင့်သင့်ကိုလှည့်စားနေသည်ကိုသင်ကောင်းစွာသိပြီး၎င်းစက်ကိုလူတစ် ဦး ၏ကိုယ်ခန္ဓာ၏ထောင့်တစ်ဝိုက်တွင်မည်သည့်နေရာ၌မဆိုသူမသိနိုင်သော်လည်း၎င်းသည်မှန်ကန်သည်။ SPY70 သည်မှန်ကန်သည်။ တစ်ချိန်ကသူ့ကိုသက်သေပြနိုင်သည့်အရာများကိုမှတ်တမ်းတင်ရုံသာမကသင်၏လှည့်စားနေသောမိမိကိုယ်ကိုသာမကအခြားသူတစ် ဦး ၏နှလုံးသားနှင့်ပါကစားခြင်းနှင့်အတူပျောက်ကွယ်သွားခြင်းမရှိစေရန်သင်လိုအပ်သည့်ထောင့်ကိုသေချာစေရန်။ ဤကိရိယာတွင်ပါဝါဘက်ထရီပါ ၀ င်သည်။ သင်သည် XNUMX နာရီအထိမှန်မှန်မှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် WIFI မှတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်မှုဆက်ရှိနေချိန်တွင်အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာစောင့်ဆိုင်းနိုင်ပြီးသင်ပြီးပြည့်စုံသောထောင့်နှင့်ရိုက်ချက်ကိုသေချာအောင်ပြုလုပ်နိုင်ပြီးအခြားသူကငြင်းပယ်။ မရပါ အမြဲတမ်း သင်ဤလိမ်လည်လှည့်ဖျားနေသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး၊ လုံခြုံရေးရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုသို့မဟုတ်ပျော်စရာအတွက်သူလျှိုပြုလုပ်နေသည်ဖြစ်စေဤအသုံးအဆောင်သည်အသုံးမ ၀ င်တော့ပါ။ ၎င်းသည်ဖြည့်ထားသောသွင်ပြင်လက္ခဏာများကြောင့်၎င်း၏ရလဒ်များကိုသင့်အားနှစ်သက်စေသည်။
SPY208 - WIFI BLUETOOTH SPEAKER ကင်မရာ -
ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်အလွန်ထိခိုက်လွယ်သောအရာဖြစ်ပြီးသင်မှန်ကန်သောအထောက်အထားနှင့်မပြလျှင် အခြားလူတစ်ယောက်တောင်မှသူကသူမကိုလှည့်စားတာဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်ဟာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သင်တို့ကိုမှီနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ထို့ကြောင့်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုစောင့်ကြည့်နေစဉ်သို့မဟုတ်လှုပ်ရှားမှုတိုင်းကိုသေချာလုပ်နေစဉ်တစ်ချိန်တည်း၌ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းမပြုနိုင်ရန်သင်ဘာလုပ်နိုင်သည်ကိုသိလိုလျှင်သူကသင့်အားစောင့်ကြည့်နေပါသလား။ ဟုတ်ပါတယ်၊ SPY208 အတွက်လျှောက်ပါ။ ဒီအရာဟာ Bluetooth စပီကာရဲ့ရူးသွပ်တဲ့ဗားရှင်းပဲ။ သင်နေရာ၊ ရုံး၊ အခြားနေရာတွေမှာသီချင်းတွေကိုနာရီပေါင်းများစွာဖွင့်နိုင်ပြီးသင်အဲဒီထောင့်ကိုလိုချင်တဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့မျက်လုံးကိုမကြည့်နိုင်အောင်ကစားခြင်းကိုသာထားလိုက်ပါ။ မင်းအဲဒီအချိန်ကမဟုတ်ရင်သူလုပ်နေတာ၊ ၎င်း၏ WIFI ကွန်ယက်နည်းပညာဖြင့်မည်သည့်အချိန်၌မဆို၊ သင်၏အိမ်ရှိမည်သည့်နေရာမှမဆို၎င်းနှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။ ၎င်း၏ 4L HD ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းကသင့်အားဗီဒီယိုအမှုန်တိုင်းကိုသင်ကိုယ်တိုင်သေချာစေပြီး၎င်းသည်ချွတ်ယွင်းခြင်းမရှိချေ။ ၎င်းသည် ft Card SDN slot တစ်ခုဖြစ်ပြီး 128 GB အထိ SD ကဒ်များကိုအထောက်အပံ့ပေးသောဤစက်ကြီးကိုသင်အသုံးပြုရန်လိုအပ်သည့်သိုလှောင်မှုကိုပေးသည်။
SPY156 - ဖျောက်ထားသည့်အောက်ဆီဂျင်ဘူး -
ဒီပစ္စည်းဟာအိမ်တိုင်းနီးပါးမှာရရှိနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးလုံးဝဂရုစိုက်မှုကင်းမဲ့စွာအသုံးပြုနိူင်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့သူကသူမရှာဖွေမတွေ့နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်သင့်တယ်။ တစ်ရှူးသေတ္တာ?! ရှစ်နှစ်ရှိပြီ၊ SPY156 သည်ကျွန်ုပ်တို့စာရင်းအရဤစာရင်းတွင်အကောင်းဆုံးကိုဖန်တီးသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်လှည့်စားသောမိတ်ဖက်ဖြစ်ရန်၊ သင်၏အိမ်လုံခြုံရေးအတွက်၊ မျက်လုံးစောင့်ရန်ဖြစ်စေမည်သူ့ကိုမဆိုစောင့်ကြည့်နိုင်သည့်အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏ပတ်ပတ်လည်သို့မဟုတ်အခြားဘာမှန်းကျင်။ သူကအရာရာတိုင်းကိုအလွယ်တကူဖုံးအုပ်ထားနိုင်ပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာနည်းပညာနှင့်ပတ်သက်ပြီးတစ်သျှူးသေတ္တာဘယ်လောက်ကျစ်ကျစ်လစ်လစ်ဖြစ်စေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ မှန်ကန်ပါသည်၊ ဤကိရိယာသည်ဘက်ထရီပါ ၀ င်ပြီး2နာရီအထိဖြောင့်စွာမှတ်တမ်းတင်နိုင်ပြီး 32 GB အထိ SD ကဒ်ကိုထောက်ပံ့နိုင်သည်။ ဒါ့အပြင်ဒီတစ်ရှူးသေတ္တာကင်မရာရဲ့အထူးအင်္ဂါရပ်တစ်ခုကသင်ဟာမည်သည့်ဖုန်း၊ ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်လက်တော့မှမဆိုစိတ်ပူစရာမလိုဘဲအချိန်မရွေးကြည့်ရှုနိုင်ခြင်းပဲ! ၎င်းသည် 1080p resolution အထိမှတ်တမ်းတင်နိုင်ပြီးပြီးပြည့်စုံသောအရည်အသွေးရှိသည့်အချိန်တွင်သင်တပ်ဆင်ထားသည့်inရိယာအတွင်းရှိမည်သည့်လှုပ်ရှားမှုများကိုမဆိုစောင့်ကြည့်နေသည်။ ဤသည်မှာမည်သူမျှသံသယဝင်စရာမလိုပါ
သင်သို့မဟုတ်သင်ဒီနေ့ခေတ်တွင်အဖော်ပြုလိုသူမည်သူမဆိုသည်တေးဂီတကိုအစဉ်အမြဲရနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ လူတိုင်းကသူရွေးတဲ့နေရာတိုင်းမှာဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်အချိန်မှာမဆိုသူထိုင်နေတဲ့အချိန်တိုင်းမှာသူရိုက်ချင်နေတဲ့သီချင်းတစ်ပုဒ်ကိုရွေးချယ်တာပါ။ ဒါကြောင့်သင်ကအဲဒီ့အခြေအနေကိုတစ်ချိန်တည်းမှာအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ထားချင်တယ်ဆိုရင်သူကလူကိုမတွားဘဲထွက်သွားစေလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ဒါကမင်းအတွက်အရာပဲ။ SPY113 သည် HD resolution ဗီဒီယိုများကိုအချိန်မရွေးမှတ်တမ်းတင်နိုင်ပြီး၎င်းကိုသင်ကြည့်ချင်သောမည်သည့်လက်ပ်တော့သို့မဟုတ်ဖုန်းမှမဆိုသင်ကြည့်ရှုလိုသူနှင့်ဝေးကွာသွားစေနိုင်သည့်အားသာချက်များကိုပေးသည်။ သူတို့လုပ်နေတာတိုင်းကိုတိတိကျကျအကာအကွယ်ပေးနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးထောင့်မှာရှိနေပြီးသင့်ကို၊ သင်၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေများကိုသူတို့မလုပ်စေအောင်သေချာအောင်လုပ်ပါ။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်ယနေ့အချိန်၌စကားလုံးတစ်လုံးဖြစ်လာပြီဖြစ်သောကြောင့်ဤကိရိယာများသည်၎င်းတို့ရရှိထားသည့်အခြားပုံမှန်ဗားရှင်းတစ်ခုသာဖြစ်တော့သည်ဟုကျွန်ုပ်ခံစားမိသည်။
4696 စုစုပေါင်း Views စာ 1 Views စာယနေ့တွင်